Aaladaha Aukey ugu fiican ee aadan xagaaga seegi karin | War gadget
Xagaagii waa halkan oo inbadan oo idinka mid ah ayaa sii qorsheynaya fasaxyadiinna ka hor. Tiknoolajiyaddu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah raaxeysigayaga, wax badan baa ka maqnaan lahaa, waana taas sababta aan u go'aansanay inaan bilowno dhacdooyinkan had iyo jeer lagu rakibo aalado: Taleefanka casriga ah, saacadda casriga ah, baytariyada, fiilooyinka ... Taasi waa sababta gacanta Aukey waxaan rabnaa inaan kuu soo qaadano liis wanaagsan oo ah badeecooyin iyo aalado aadan seegi karin xagaagan si aad uga faa'iideysato ciidahaaga. In qalab la’aanta aysan yareynaynin aragtidaada. Marka hadda waad ogtahay, nala joog oo soo hel waxa alaabada ugu xiisaha badan ee aad iibsan karto.
Si loo fududeeyo, waxaan u soconeynaa mid mid oo kugula talineysa alaabada si aad u kala doorato midka kuugu xiisaha badan ama dhamaadka dhamaan sameyso isku dar oo aad gadaneyso dhamaantood, waayo?
1 Batariga la qaadan karo ee QC 3.0
2 QC 3.0 xeedho deg deg ah
3 Dual xeedho baabuur dhakhso leh
4 USB-karti sare leh fiilooyinka USB-C
Batariga la qaadan karo ee QC 3.0
Waxaan hubnaa in batteriga qalabkaaga uu muhiimad gaar ah kuu leeyahay adiga, sida dhinacyo badan oo kale, laakiin is-maamulku had iyo jeer wuu ku dhacaa xilliga ugu xun. Taasi waa sababta aan tan kuugu keenayno 20.000 mAh baytariga la qaadan karo in Aukey uu kuugu deeqo tiro aad u tiro badan oo isku xirnaan iyo suurtagal ah. Waa in la ogaadaa in baytarigan uu leeyahay afar dekedood: USB QC 3.0, USB 2A, Hillaac iyo microUSB si aad tooshkaaga ula shubatid ficil ahaan meel kasta oo aad rabto. Waa mid aad ufiican oo raaxo leh in la qaado, si aad ah ayaa lagula taliyaa.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in baytarigan uu leeyahay borotokoolka Qualcomm Quick Charge 3.0, taasi waa, waxaad ka faa'iideysan kartaa xawaaraha degdegga ah ee boosteejooyinka sida iPhone X ama Samsung Galaxy S9. Iskusoo wada duuboo waxaa nagu dhacay xaqiiqda ah inay ka mid tahay baytariyada yar ee aad ka qaadi karto adoo adeegsanaya fiilada hillaaca oo waad iibsan kartaa Wax alaab ah lama helin.
QC 3.0 xeedho deg deg ah
Qalabka kale ee naga caawin doona xagga ismaamulka waa xeedho uu sidoo kale la jaan qaadi karo Qualcomm Quick Charge 3.0 wuxuuna bixiyaa ilaa 18W. Qalabkan oo bixiya illaa 2,4 A oo si buuxda u shaqeynaya labada iPad, qalabka iPhone iyo Android, gabi ahaanba waxba kama maqnaan doontid. Waxaa loo qaabeeyey si is haysta. Sida had iyo jeer, sumcadda Aukey waxay noo oggolaaneysaa inaan ka fikirno in qalabkeenna si habboon looga ilaalin doono kuleylka iyo kororka korantada, waa wax aad muhiim ugu ah xagga nabadgelyada ee kuwa kale ee caanka ah aysan bixin karin sidaas darteedna ka raqiisan .
Waxaad ka heli kartaa xeedhokan ficil ahaan qiimo la mid ah kuwa kale ee leh waxyaabo aad u yar, Wax alaab ah lama helin. haa, adoo adeegsanaya 20% nambarka sicir-dhimista ee ay tahay inaad geliso marka aad iibsanayso «95W2SV57» Ilaa 8da Ogosto.
Dual xeedho baabuur dhakhso leh
Baabuurku sidoo kale waa qayb muhiim ah safarada badankood, waxaanan ku helaynaa wakhti fiican haddii aan go'aansano inaanan ku safrin gaadiidka dadweynaha, sidaas darteed sidoo kale waxaa muhiim ah inaan diyaar ahaano si marka aan gaariga ka degno aan Waxaan u isticmaali karnaa taleefankeena casriga ah ama kaniiniga dhib la'aan, qaasatan maadaama inbadan oo naga mid ah ay door bidaan inay u isticmaalaan boosteejooyinkan sida caadiga ah GPS mahadnaqa Maps Google ama kuwa kale
Noqo sida ay doonto ha noqotee, ikhtiyaarka ugu habboon ayaa ah xeedho dhaqsaha badan oo leh laba heer USB ah illaa 2,4 A qalabka ku habboon. Tani waxay shaki la'aan noo soo bandhigi doontaa amarka ugu dhaqsaha badan uguna hufan, qiimaha lagu darayna waa inay tahay xeedho heer sare ah, kama soo baxayo godka gaariga si uusan u soo jiidan doonin dareenka isla markaana uu u muuqan doono mid si buuxda ugu dhex jira gaariga. Wax alaab ah lama helin.
USB-karti sare leh fiilooyinka USB-C
Fiilooyinka Aukey waxay leeyihiin sumcad qurux badan oo cimri dherer leh waxayna dhisaan tayo. Si aad uga faa'iideysato dhammaan aaladaha la soo sheegay, maxaa ka yar 3-xirmo fiilooyin USB-C ah oo laga sameeyay naylon tidcan iyo Wax alaab ah lama helin.. Sidii kiiskii hore, inaad keydiso waa inaad gashaa lambarka sicir-dhimista ee soo socda: «KWFKH5OXtaas ayaa kuu ogolaaneysa keydi ilaa € 2 iibsigaaga (illaa 8 Ogosto).
Waxay ku guuleysataa wareejinta xogta illaa 5 Gbps waxayna si buuxda ugu habboon tahay amarka degdegga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Qalabka Aukey ugu fiican ee aadan seegi karin xagaagan